Dị iche iche: Onye njikwa akwụkwọ ahụaja bara uru maka GNU / Linux Distros | Site na Linux
Mondaybọchị Mọnde gara aga anyị kwuru maka ya Pywall, ngwa anyi ji mepụta agba agba site na agba kachasị nke anyị akwụkwọ ahụaja, nke anyị na-etinyezi na nke anyị ọnụ, iji meziwanye Nhazi akpaaka, agba nke ihe odide egosipụta (mkpụrụ edemede). Ya mere, taa anyị ga-ekwu maka ya Ọdịiche.
iche iche bu ihe di egwu Onye njikwa (njikwa) nke akwụkwọ ahụ aja (akwụkwọ ahụ aja). Kedu n'ime ọtụtụ atụmatụ bara uru gụnyere nkwado maka ọtụtụ Ebe Desktọpụ (DE) y Akwụkwọ ahụaja isi, tinyere faịlụ mpaghara na ọrụ ịntanetị, dị ka, Flicker, Wallhaven, Unsplash, na ndị ọzọ.
Dị ka e kwuru n'elu, anyị kwurula banyere ya n'oge na-adịbeghị anya Pywal na taa banyere iche iche, kemgbe, with these 2 applications together, onye ọ bụla nwere ike nweta a fabulous akpaghị aka ma mekọrịta ọrụ mmezi n'etiti, agba nke na akwụkwọ ahụ aja gị na agba profaịlụ nke Akara ókwú gị Terminals.
"Pywal bụ ngwa ọrụ na-ewepụta palette agba site na agba ndị kachasị na mbiet. Wee tinye agba na sistemụ niile yana ijiji na mmemme niile kachasị amasị gị. E nwere ugbu a na-akwado agba agba agba 5 ugbu a, nke ọ bụla na-enye palette agba agba maka onyonyo ọ bụla. O yikarịrị ka ị ga-ahụ atụmatụ ụcha mara mma. Pywal na-akwadokwa isiokwu ndị akọwapụtara ma nwee ihe karịrị 250 isiokwu wuru. I nwekwara ike ike gị onwe gị isiokwu faịlụ ịkọrọ ndị ọzọ." Pywal: Ngwa ọrụ na-atọ ụtọ iji hazie Terminals anyị
1 Dịgasị iche iche: Akwụkwọ ahụaja Manager (Akwụkwọ ahụaja)
1.1 Kedu ihe dị iche iche?
1.3.1 Ngwa interface
1.3.2 Iche-iche + Pywal
Dịgasị iche iche: Akwụkwọ ahụaja Manager (Akwụkwọ ahụaja)
Kedu ihe dị iche iche?
Ugbu a, iche iche kọwara ya site na onye nrụpụta ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, dị ka ndị a:
"Iche-iche dị iche iche bụ ihe mmeghe akwụkwọ ahụaja Manager (Nchịkwa) maka Linux. Ọ bụ nnukwu ngwa na-agụnye atụmatụ dị ukwuu, na obere pere mpe yana yana iji ọrụ iji mfe iji. Aridị dịgasị iche nwere ike iji ihe oyiyi mpaghara ma ọ bụ ibudata akwụkwọ ahụaja na-akpaghị aka site na Unsplash na isi mmalite ntanetị ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ọ na - enye gị ohere ịgbagharị ha n'otu oge, ma na - enye ụzọ dị mfe iji kewaa nnukwu onyonyo na ihe efu. Di iche iche nwekwara ike igosipụta amamihe dị na ọchị ma ọ bụ ọchị ma ọ bụ elekere dijitalụ mara mma na desktọpụ gị."
Taa, iche iche na-aga n'ihi na nọmba mbipute 0.8.5, na ụfọdụ ọrụ ndị o nwere taa bụ ndị a:
Mgbe akwadoro, aridị dịgasị iche iche na-anọdụ dị ka akara ngosi dị ka ohere iji kwusi ma kwụsịtụ. Ma ọ bụghị ya, menu ntinye ya na desktọọpụ na-enye usoro nhọrọ yiri ya.
Ọ gụnyere ọtụtụ mmetụta onyonyo, dị ka eserese mmanụ na blur, yana nhọrọ maka itinye ntinye na elekere na ndabere.
Ọ na-abịa na installers na nkwado maka Arch Linux, Debian 9+, Fedora, OpenSUSE, na Ubuntu 16.04+.
Maka ozi ndị ọzọ na iche iche ị nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ ha na GitHub.
Lee ụfọdụ nseta ihuenyo nke 0.8.5 iche iche, arụnyere na ebe nchekwa, yana Njikwa ngwugwu Apt, site na ya Interface na site na mmetụta mekọrịta n'etiti Pywal na ya:
Iche-iche + Pywal
Cheta na: Maka ezigbo ihe atụ nke otu esi eji Iche-iche + Pywal anyị ejirila dị na mbụ, a Omenala respin de Linux MXakpọ Ọrụ ebube, ya mere usoro a kọwara ga-emegharị ka Desktọpụ Environment (Desktop Enviroment - DE) akpọ XFCE. Agbanyeghị otu mmetụta ahụ nwere ike ịmegharị ma nweta ya na nke ọ bụla DE / WM, na obere mgbanwe.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Variety», ezigbo mma Onye njikwa (nchịkwa) nke akwụkwọ ahụ aja (na akwụkwọ ahụ aja), nke n’etiti ọtụtụ atụmatụ bara uru gụnyere nkwado maka ọtụtụ Desktọpụ Environments (DE) na isi mmalite akwụkwọ ahụaja, gụnyere faịlụ mpaghara na ọrụ ntanetị, dị ka, Flickr, Wallhaven, Unsplash, na ndị ọzọ; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Dị iche iche: Onye njikwa akwụkwọ ahụaja bara uru maka GNU / Linux Distros